Ihe ntanetị foto na Lightroom
Adobe Lightroom apụtawo ugboro ugboro na ibe nke saịtị anyị. Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oge ọ bụla okwu ahịrị banyere ọrụ dị ike, nke dị ukwuu. Otú ọ dị, nhazi foto na Lightroom enweghị ike ịkpọ onwe ya. Ee, enwere ngwaọrụ kachasị mma iji rụọ ọrụ na ìhè na agba, ma, dịka ọmụmaatụ, ị gaghị enwe ike igbanye onyinyo na ahịhịa, ọ bụghị ịkọwa ọrụ dị mgbagwoju anya.
Igodo Na-ekpo ọkụ maka Ọrụ Ndenye na Nwepu na Adobe Lightroom
Adobe Lightroom, dịka ọtụtụ mmemme ndị ọzọ maka iji ọrụ, nwere ọrụ dị mgbagwoju anya. Ịmepụta atụmatụ niile ọbụlagodi otu ọnwa dị, nke siri ike. Ee, nke a bụ ma ọ bụ ihe ka ọtụtụ n'ime ndị ọrụ na-adịghị mkpa. N'otu aka ahụ, ọ ga-adị, a ga-ekwu banyere isi "ọkụ" nke na-agba ọsọ ọsọ gaa na ihe ụfọdụ ma mee ka ọrụ ahụ dị mfe.
Isi ntụziaka nke iji Adobe Lightroom
Kedu esi eji Lightroom? Ajuju otutu foto novice juru ajuju a. Nke a abụghị ihe mgbagwoju anya, n'ihi na usoro ihe omume ahụ dị nnọọ mfe ịmụta. Na mbu, ị naghị aghọta otú ị ga-esi mepee foto ebe a! N'ezie, ọ gaghị ekwe omume ịmepụta ntuziaka doro anya iji mee ihe, n'ihi na onye ọrụ ọ bụla chọrọ ụfọdụ ọrụ ụfọdụ.
Portrait retouch na Lightroom
Izizi nkà nke foto, ị nwere ike izute eziokwu ahụ bụ na foto nwere ike ịnwe obere ntụpọ nke chọrọ ka ịmegharị. Lightroom nwere ike ijikwa ọrụ a n'ụzọ zuru oke. Isiokwu a ga-enye ndụmọdụ maka ịmepụta ihe osise dị mma. Ọmụmụ ihe: Ihe ntanetị ntanetị na Lightroom. Tinye ntinye aka na foto dị na Lightroom. A na-etinyeghachi azụ na ihe osise ahụ iji wepụ wrinkles na ntụpọ ndị ọzọ na-adighi mma, iji mee ka akpụkpọ ahụ dị mma.
Nhazi usoro nke foto na Lightroom
Nhazi nhazi nke foto na Adobe Lightroom dị mfe, n'ihi na onye ọrụ nwere ike ịhazi otu mmetụta ma tinye ya na ndị ọzọ. Nke a zuru oke ma ọ bụrụ na e nwere ọtụtụ ihe oyiyi na ha niile nwere otu ìhè na ikpughe. Anyị na-arụ ọrụ nhazi nke foto na Lightroom. Iji mee ka ndụ gị dịkwuo mfe ma ghara ịhazi ọtụtụ foto na otu ntọala ahụ, ị ​​nwere ike idezi otu oyiyi ma tinye nhazi ndị a na ndị ọzọ.
Wụnye omenala na Adobe Lightroom
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na foto, mgbe ahụ, ọ dịkarịa ala otu ugboro na ndụ jiri ọtụtụ nzacha. Ụfọdụ na-eme ka foto na-acha ọcha ma na-acha ọcha, ndị ọzọ - na-emepụta oge ochie, na ndị ọzọ - gbanwere onyinyo. Ọrụ niile ndị a yiri ka ọ dị mfe na-emetụta mmetụta dị na foto ahụ.
Anyị na-ekwu banyere usoro ihe omume maka ogo nhazi site na Adobe a ma ama. Ma mgbe ahụ, anyị na-echeta, ọ bụ naanị isi ihe na ọrụ ndị metụtara. N'isiokwu a, anyị na-emepe usoro ntanetị nke ga-ekpuchi nkọwa ụfọdụ nke ịrụ ọrụ na Lightroom. Ma nke mbụ, ịkwesịrị ịwụnye ngwanrọ dị mkpa na kọmputa gị, nri?
Otu esi echekwa foto na Lightroom mgbe nhazi
Zọpụta faịlụ - nke ahụ ga-adịrị mfe. Ka o sina dị, ụfọdụ mmemme dị nnọọ ka ha na-eche na ọbụna ihe dị otú ahụ dị mfe na-eme ka ndị novice na-agbagha. Otu ihe omume dị otú ahụ bụ Adobe Lightroom, n'ihi na nchekwa Save adịghị ebe a niile! Kama nke ahụ, enwere "Mbupụ" nke na-enweghị ike ịghọta onye na-amaghị ama.
Ndozi akwa nke foto na Lightroom
Ọ bụrụ na ịchọtaghi agba nke foto, ị nwere ike idozi ya. Idozi agba na Lightroom dị mfe, n'ihi na ịkwesighi inwe ihe ọmụma ọ bụla a chọrọ mgbe ị na-arụ ọrụ na Photoshop. Ihe ọmụmụ: Ihe ntanetịime foto na Lightroom Ịmalite na Agba Correction na Lightroom Ọ bụrụ na ị kpebie na onyinyo gị chọrọ mgbazi agba, a na-atụ aro ka ị jiri ihe oyiyi RAW, dịka usoro a ga-eme ka ị nwee ike ịme mgbanwe dị mma ma ọ bụrụ na atụghị ya na JPG nkịtị.